Matanho gumi nemashanu ekuvandudza kuvanzika kwako uye chengetedzo pane iOS (I) | IPhone nhau
15 matanho ekuvandudza yako yakavanzika uye chengetedzo pane iOS (I)
Wese munhu anofanira kukwanisa kuziva kuti sei uve nehutongi hwakazara hwehunhu hwako uye chengetedzo, kunyanya munguva dzakadai. Nepo vashandisi ve iPhone ne iPad vachipa vashandisi veApple runyararo rwepfungwa, vagadziri vewebhusaiti, uye kunyangwe Apple, vachiri kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kumidziyo. Kuti unzwisise izvi zvakadzama uye kudzidza nzira dzekuvandudza yako zvakavanzika uye chengetedzo kunyangwe paIOS, isu takanyora dzakawanda sarudzo dzatiri kuzokutumira iwe kuendesa kwakadzama kaviri.
Computerworld yakaburitsa runyorwa rukuru rwehunhu hunogona kuchinjwa pa iPhone ne iPad. Isu zvakare tine runyorwa rwe gumi neshanu nzira dzakareruka dzekuwana kudzora kwekuvanzika pane iOS. Tarisa.
1 Tsvaga yangu iPhone
2 Notifications kiya chinovhara mameseji uye tsamba
3 Alphanumeric kuvhura kodhi
4 Delete zvemukati mushure me10 zvisina kubudirira kuedza
5 Finyelela iyo yekuvhara skrini
6 Lock manotsi
7 Matanho maviri-echokwadi
Tsvaga yangu iPhone
Ose iPhone mushandisi anofanirwa kushandisa Tsvaga Yangu iPhone chishandiso chekudzivirirwa mune chiitiko chekuti ivo vangazomborasa mudziyo wavo Kuti uite izvi, enda kuZvirongwa, ipapo iCloud uye kusarudza Tsvaga yangu iPhone kuti imise iyo. Inofanirawo shandisa Send nzvimbo yekupedzisira, saka unogona kuwana pfungwa yekuti yako iPhone kana iPad iripi kana ikafa. Kana ukarasikirwa nazvo, enda kuICloud.com kana shandisa iyo Tsvaga yangu iPhone app pane chakasiyana kifaa uye kusaina neApple ID yako kuti uwane kana kuivhara.
Notifications kiya chinovhara mameseji uye tsamba
Kana iwo mameseji kana maemail aunogamuchira dzimwe nguva aine ruzivo rwakashata, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti zviyeuchidzo zvako hazviratidze chero ruzivo nezvazvo. Enda kuZvirongwa, Notifications, wobva wasarudza Meseji kana Tsamba (kana zvese zviri zviviri.) Pasi, unogona kuvhura kana kudzima zviongororwa. Sebhonasi, iOS 10.2 inosanganisira sarudzo nyowani ku ratidza kutarisisa kana kukiyiwa, saka zvinongoonekwa muzviziviso mushure mekunge mazarura chigadzirwa.
Alphanumeric kuvhura kodhi
Iwe unoda kusimbisa chengetedzo yako kana uchivhura foni yako? Iwe haufanire kunamatira neyechinyakare ina-manhamba kana kunyange matanhatu-manhamba manhamba password musanganiswa. Iwe unogona kugadzira password izere nemavara, nhamba uye mavara kana uchida. Enda kuZvirevo uye wozobata ID uye passkey. Sarudza Chinja nzira yekuwana. (Kutanga, iwe unofanirwa kuisa yako yazvino.) Uyezve, pasi pePasscode Sarudzo, sarudza Tsika alphanumeric kodhi kuseta nyowani, yakaoma kunzwisisa kodhi.
Delete zvemukati mushure me10 zvisina kubudirira kuedza
iOS ine yakavakirwa-mukati chengetedzo marongero, mukati meiyo Kubata ID uye Passcode chikamu. Kana mumwe munhu akaedza kuvhura foni neyakavanzika password ka10, data rese riri pa iPhone rinodzimwa. UsanetsekeWith negadziriro yeparutivi kuburikidza iCloud uchakwanisa kupora vakawanda mashoko. Ingo pfura pasi pasi iro peji reZvirevo uye batidza data bvisa
Finyelela iyo yekuvhara skrini
Izvi zvakagadziridzwawo muTouch ID uye paseti yekodhi yekodhi. Gonesa kana kudzima akawanda maficha sezvaunoda mune iyo Bvumidza kuwana kana yakavharwa chikamu.
Ne iOS 10 unogona pakupedzisira kukiya manotsi ega. Pane chero chinyorwa, tinya iyo Share icon kumusoro kwepamusoro uye sarudza Lock chinyorwa. Gadzira password, inozopedzisira yave yako rakasiyana password kune ese akavharwa manotsi. Kubva ipapo, iwe unozoda iro password kuti uverenge manotsi uye nekuchinja mune ramangwana.
Gonesa iyo nhanho-mbiri yekusimbiswa yeApple ID yako, kuitira kuti pese paunoedza kuisa chishandiso chitsva, Apple inoda imwe nhanho yekuwedzera kuchengetedzeka. Nhanho iyoyo ndeyekutora kodhi yekutendesa yakatumirwa iwe yaunofanirwa kunyora kunze kwepassword yako. Unogona kumisa iyi sarudzo kubva kuApple peji. Kuwana uye tinya tanga mune maviri-nhanho sisitimu yekutenderera chikamu kuti umise iyo.
Wazviona zvichibatsira here? Munguva pfupi iwe uchange uine chiverengero chitsva pamwe nemamwe matipi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » 15 matanho ekuvandudza yako yakavanzika uye chengetedzo pane iOS (I)
15 matanho ekuvandudza yako yakavanzika uye chengetedzo pane iOS (II)
Apple iri kutsvaga kuwana mitengo yakadzikiswa nemazita eApple Music